२४ आषाढ २०७७, बुधवार | Jul 08, 2020 | 21:19:30
By radiojanakpur on	 May 30, 2017 अन्तरवार्ता
काठमाडौं, जेठ १६– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमै बसेर भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यात्ने योजना बनाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
भरतपुरमा माओवादी र कांग्रेस मिलेरै धाँधली गर्ने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाउँदै ओलीले एमालेले कुनै पनि हालतमा पुनः मतदान हुन नदिने बताए ।
मंगलबार काठमाडौंबाट स्थानीय तहमा विजयी उम्मेदवारहरुको विजयीसभालाई भृकुटीमण्डपमा सम्बोधन गर्दै ओलीले चितवनमा बालुवाटारबाट खटाइएका ‘गुरिल्ला’ हरुले योजनाबद्ध रुपमा मतपत्र च्यातेको आरोप लगाउँदै ओलीले मतपत्र च्यात्नेहरुले नै पुन मतदानको माग गरेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । आफूहरु जहाँबाट मतगणना रोकिएको हो त्यहीबाट पुन मतगणना हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै फेरि मतदान भए चुप लागेर नबस्ने बताए ।
पदकमा मनपरि आरोप
ओलीले सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको वितरण गरेको पदकमा मनपरि भएको दाबी गरे । उनले सम्मान शर्म गर्न लायक रहेको भन्दै राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग गरेर आफ्ना मान्छेलाई पदक दिइएको बताए ।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले –म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्छु ,कतिओटा बिहे गरेपछि तक्मा पाइने ? राज्य ढुकुटीमा बेइमानजी गर्ने ? यो एमालेलाई मान्य छैन।’
सरकारले प्रम पुत्र प्रकाश दाहाललाई समेत पदक दिने निर्णय गरेपछि ओलीबाट यस्तो टिप्पणी अाएको हो । यद्यपी प्रमपुत्र प्रकाश दाहालले पदक नलिने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् ।
कार्यक्रममा ओलीले थपे– ‘अवसरहरु कसैका व्यक्तिगत होइन । के तपाईँका छोरा महान समाजसेवी हुन् ? अरु नेवपाली कोहि भेटिएनन् ? देशका लागि काम गर्ने कोहि भेटिएनन् ? प्रश्न गर्न पनि लाज लाग्छ ।’ उनले मनपरि नगर्न चेतावनी दिँदै देशमा एमाले पनि छ भन्ने हेक्का राख्न सुझाव दिए ।
महाभियोग गलत थियो भन्ने गलत
उनले प्रधानन्यायाधीश माथि लगाइएको महाभियोग गलत थियो भन्ने कांग्रेस माओवादीले नै पुष्टि गरेको दाबी गरे । उनले भने, –‘बल्लबल्ल एउटा महिला प्रधानन्यायाधीश भइथिन् ड्याम्मै महाभियोग दर्ता गराए । हिजो तपाईहरुले सुनिहाल्नु भयो फेरि फिर्ता गराए । यो त अब टाढा पुगेर फेरि पछि फर्केको जस्तो भयो । महाभियोग बोकाएर घर फर्काउन खोजेथे । आफैं पछि फर्के ।’
जनतालाई दुःख दिन चुनाव सारेको आरोप
सरकार चाहिएको छैन
‘हामीलाई कसले सरकार बनाउन छ भन्ने मतलब छैन । हामी चुनावबाट बहुमतका साथ राजमार्गबाट सिंहदरबा पस्छौं’, ओलीले भने, ‘ कपाली तमसुक गरेर ६–६ वा ९–९ माहिनाका लागि सरकारमा जान्नौं । एमाले हतार गरेर सरकारमा जाने पक्षमा छैन । बाटोबाट जान्छौं जस्केलाबाट होइन । ढोकाबाट जान्छौं झ्यालबाट होइन । ’